७० वर्षे बृद्धको जग्गा अर्कैलाई नामसारी, वडाध्यक्षकाे बदमासी | Ekata News
७० वर्षे बृद्धको जग्गा अर्कैलाई नामसारी, वडाध्यक्षकाे बदमासी
काठमाडौं । ललितपुरको कोनज्योसोम गाउँपालिकामा वडाध्यक्षकै मिलेमतोमा एक व्यक्तिको जग्गा अर्कैको नाममा पास गरेको फेला परेको छ । कोन्ज्योसोम गाउँपालिका ४ का वडाध्यक्ष तीर्थबहादुर घलानको मिलेमतोमा वीरबहादुर स्याङ्तान तामाङ भनिने वीरे तामाङको नाममा दर्ता प्रमाणित भएको अर्कै ब्यक्तिको नाममा पास भएको हो ।
वडाध्यक्ष घलानले वीरबहादुरको नाममा दर्ता नापी भएको तर जग्गाधनी पुर्जा नभएको साविक नल्लु गाविस वडा नं. ७ ख को कित्ता नंं. ४१, ४७ र ५१ नम्बरको जग्गा अर्कै वीरबहादुर भन्ने व्यक्तिका छोराहरूको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेका थिए । एउटाको जग्गा अर्कैका नाममा पास गर्न सिफारिस गरेबापत वडाध्यक्ष घलानले मोटो रकम कमिसन लिएको समेत खुलेको छ ।
कसरी भयो एउटाको जग्गा अर्कैको नाममा पास
मालपोत कार्यालय ललितपुरका अनुसार साविक नल्लु गाविस ४ ख मा पर्ने कित्ता नं. २८, ४१, ४७ र ५१ नम्बरको जग्गा २०१९ साल वैशाख १ गते विरबहादुर स्याङतान तामाङको नाममा नापी भएको थियो । तर पछि २०४१ फागुन २१ गते नागरिकता बनाउने क्रममा वीरबहादुरकै नाम वीरे स्याङतान भनेर लेखिदिएपछि उनले स्रेस्तामा कायम भएको जग्गा भोगचलन गर्दै आएपनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिन पाएनन् ।
तर अहिले प्रमाणपुर्जा जरुरी भएपछि उनले गत माघमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा ल्याउन प्रकृया शुरु गरे । सोही अनुसार मघ २१ गते वडा कार्यालयले वीर बहादुर र वीरे एउटै व्यक्ति भएकोले स्रेस्तामा वीरबहादुरको नाममा कायम भएको जग्गा वीरेको नाममा प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउन वडा कार्यालयले सिफारिस पनि ग¥यो । वडाध्यक्षले गरेको सिफारिसमा बाजे सुनाराम स्याङ्तानकाे नाति केनामसिंह स्याङ्तानकाे छोरा २०४४ साल फागुन २१ गते ७/१०४६ नम्बरको नागरिकता नागरिकता लिएका वीरेको नाममा जग्गा कायम गरिदिनु भन्ने उल्लेख छ ।
तर वडाध्यक्ष घलानले गतवर्ष नै साे जग्गा छुट जग्गा हाे भन्ने थाहा पाएपछि सोही वडाका मृत्यु भइसकेका वीरबहादुर स्याङतान तामाङ नामको अर्कै व्यक्तिका छोराहरुकाे नाममा सिफारिस गरेकाे फेला परेकाे छ । फागुन २१ मा सक्कली जग्गाधनीले जग्गाकाे पुर्जा लिन सिफारिस मागेपछि वडाध्यक्ष घलानले हतार हतार नक्कली जग्गाधनीका छाेराहरूलाइ पुर्जा लिन पठाएकाे भेटिएकाे छ । मालपोत कार्यालयमा रहेको मिसिल अनुसार वीर बहादुरको नामको उक्त जग्गा मानबहादुर तामाङ, साइली स्याङतान लगायत ५ जनाको नाममा नामसारी भएको छ ।
वास्तविक जग्गाधनी, भोगचलन गरिरहेका वीरबहादुर मालपोत कार्यालय पुग्दा ४ कित्ता जग्गामध्ये ४१, ४७ र ५१ गरि ३ कित्ता जग्गा अर्कैको नाममा पास भएको थाहा भएको थियो । अर्कैको नाममा पास भएको सो जग्गाको कूल क्षेत्रफल ३ रोपनी ४ आना रहेको छ ।
सो जग्गामध्ये कित्ता नं. ५१ मा बिर बहादुरको घर रहेको छ भने अरु पाखोबारी हो । ५८ वर्षअघि आफ्नो नाममा दर्ता भएको र भोगचलन भैरहेको जग्गा पास गर्न जाँदा मालपोत कार्यालयले अर्कैको नाममा पास भएको थाहा भएपछि उनीहरु छाँगाबाट खसेजस्तै भए ।
एउटै गाउँका छिमेकीले आफ्नो जग्गा लिएको थाहा भएपछि उनीहरूले आफ्नो जग्गा फिर्ता गर्न माग गरेका थिए । जग्गा पास गर्नेहरूले आफूहरूको नियत नभएपनि अरुले जग्गा पास गर्न लगाएकोले फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएका थिए । तर पछि उनीहरूले आफूले जग्गाको लागि लाखौं रकम खर्च गरेकोले जग्गा फिर्ता गर्न नसक्ने भन्दै आनाकानी गरिरहेका छन् ।
साे जग्गा मानबहादुर लगायतकाे नाममा नामसारी गर्दा मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा गुरु भट्ट लगायतको टोली नल्लु गाउँमा पुगेर सर्जमिन गरेका छन् । भट्टले वडाध्यक्षकै बदमासीका कारण यस्तो घटना भएको बताए ।
‘वडाध्यक्षले नै जग्गा धनीकाे नाम सिफारिस गरेको छ, हाम्रो सर्जमिन प्रमाणित नै वडाध्यक्षले गरेको छ,’ भट्टले भने,‘वडाध्यक्षकै दस्तखत छ, त्यतिबेला उनीहरू सर्वे नापीको पुर्जा लिएर आएका थिए, त्यसैले उहाँलाई नै जानकारी हुनुपर्छ ।’ भट्टले जग्गा कहीँ विक्री पनि नभएको र जग्गाधनीलाई बोलाइसकेकाेले वडाध्यक्षकाे सिफारिस गलत भएकाे भए अनुसन्धान पछि थप कारबाही गरिने बताए।
वडाध्यक्ष भन्छन्,‘मैले सर्जमिन गरेको होइन’
यता वडाध्यक्ष तीर्थबहादुर घलानले आफूले उक्त जग्गा सर्जमिन गर्दा फिल्डमा नगएको बताए । यद्यपि मालपोत कार्यालयमा रहेका कागजातमा उनले नै सर्जमिन हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘एउटै मान्छेलाई सिफारिस गरेर जग्गा नामसारी गरेर ल्याएको हो । फेरी एक डेढ वर्षपछि मेरो यो जग्गाको फिल्ड बुक र श्रेस्ताको लागि सिफारिस दिनु भनेर सिफारिस माग्न आयो,’ उनले भने,‘सिफारिस दिएर पठाउँदा उहाँको जग्गा अर्कैले लगिसकेको भन्ने थाहा भो । फिल्डबुक र स्रेस्ता उतार्न गएको मान्छेले मलाई भन्यो । भनेपछि मात्रै मलाई थाहा भो ।’
उनले उक्त वडामा ३०/४० जना व्यक्तिको नाम वीर बहादुर भएको भन्दै आफ्नाे कमजाेरी लुकाउन खाेजे । एकै जग्गा दुई जनाको नाममा पास हुँदा समेत उनले आफूहरुले त्यस्तो नगरेको पटकपटक दोहोर्याए।
‘यहाँ वीर बहादुर धेरै छन् । वडामा बोलाएर छलफल भइरहेको छ । सोमबार फेरी बोलाएको छ,’ उनले भने, ‘सर्जमिन गर्ने मान्छे सबैले सजाय भोग्न पर्छ । यो ठूलो केस होइन हामी मिलाउँदै छौँ । ’ उनले साे वडामा अर्को १२ रोपनी जग्गा अख्तियारदेखि ठूला मिडियाले उठाएर केही नभएकाे भन्दै सकेकाे लेख्न चुनाैती समेत दिए ।